Igumbi lakho lokulala e indlu enendawo yokuphola sinombuki zindwendwe onguSantiago
Ifihlwe kude kumaphandle eBoyaca, kodwa ifikeleleka ngokulula ngohola wendlela, iHacienda Venecia, ikwindawo ephambili yeBoyaca yezona ndawo zabakhenkethi. Yonwabela izidlo zangaphandle kumoya welizwe elivulekileyo, ecaleni kweentaba ezingalibalekiyo zeentaba zeBoyaca kunye nebala elivulekileyo apho unokushiya khona amaxhala esixeko ngasemva. Indawo egqibeleleyo yosapho kunye nabahlobo ukonwabela umlingo kunye nomtsalane waseBoyaca, eColombia.
Ikhaya lelizwe langoku elinamagumbi ama-4, amagumbi okuhlambela ayi-4, iibhedi ezisi-8 (kunye ne-matrasi eyongezelelekileyo), amagumbi amabini okuhlala, ikhitshi elinezixhobo zombane (ifriji, izitovu ezi-5, ii-oveni ezi-2, i-blender, isinki enkulu) kunye netafile encinci leyo. ngokuhambelanayo ilingana abantu aba-4, igumbi lokuvasa impahla elinomatshini wokuhlamba we-LG, itafile enkulu yokutya ehlala abantu abasi-8, kunye neziko elitofotofo elilungele imicimbi ekhethekileyo yosapho.
4.76 · Izimvo eziyi-77
IHacienda Venecia, ikwindawo ezolileyo, ekhuselekileyo, nefihlakeleyo.
Ndiya kufumaneka kuyo nayiphi na imibuzo, izimvo, kunye neenkxalabo. Ukusuka kwizalathiso ukuya kwezona ndawo zokutyela zibalaseleyo, ukuya kwezona ndawo zikhethekileyo zabakhenkethi, iindwendwe zinokuxhomekeke kum ngayo nantoni na eziyifunayo ngexesha lokuhlala kwazo.
Ndiya kufumaneka kuyo nayiphi na imibuzo, izimvo, kunye neenkxalabo. Ukusuka kwizalathiso ukuya kwezona ndawo zokutyela zibalaseleyo, ukuya kwezona ndawo zikhethekileyo zabakhenket…
Ixesha lokuphuma lingo:03:00
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R1623